IUganda ibamba umboniso we-4 weentaka zase-Afrika- iNiche enkulu yoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » I-Uganda ibamba uMboniso we-4 weeNtaka zase-Afrika-iNiche eNkulu yoKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseUganda
I-Uganda ibamba uMboniso we-4 weeNtaka zase-Afrika-iNiche eNkulu yoKhenketho
Umboniso weentaka waseAfrika
Ukubukela iintaka lelinye lamashishini akhula ngokukhawuleza kwezokhenketho kwihlabathi liphela, ukuvela njengecandelwana loshishino olusekwe kwindalo apho ukhenketho lwezokhenketho lujolise ekutyeleleni iindawo ukubona iintaka.
Abagadi beentaka zezona nkcitho zikhulu kwicandelo lokhenketho kunye nokhenketho.
Ngokomndilili, bachitha ngaphezulu kwe- $ 7,000 ngaphezulu kweentsuku ezingama-21, besenza ukubukela intaka into enenzuzo enkulu.
Ukubukela iintaka kuye kwaba yinto eyothusayo kwiipaki zesizwe zaseUganda, kuzisa ingeniso yokhenketho efunekayo.
The Umboniso weentaka waseAfrika kulindeleke ukuba ibekho ngo-Disemba 10-12, 2021, e-Entebbe, e-Uganda.
Ngokuka Herbert Byaruhanga, uMlawuli oPhetheyo we Bird Uganda Safaris Ltd. amandla amakhulu okwahlulahlula ukhenketho lwaseUganda oluxhomekeke kancinci ekulandeleleni iigorila. I-Uganda ineentlobo zeentaka ezingaphezu kwe-7,000, ezinye zibandakanya indawo ezinqabileyo zelizwe, zommandla, nezaseAlbertine abathi abalindi beentaka banqwenela ukongeza kuludwe lwabo lweentaka. ”
UStephen Masaba, uMlawuli woPhuhliso lwezoShishino eUganda Wildlife Authority, uncome iinzame zokuqeqesha abakhokeli beentaka abaninzi ukusukela oko ukubukela iintaka kuye kwaba yinto ebalaseleyo Iipaki zesizwe zaseUganda, Ukutsala ingeniso engaphezulu.
Lo mboniso wesine weentaka wase-Afrika uye waba yindawo yokuhlangana kwindawo ebukele iintaka ngaphakathi nangaphandle kwe-Afrika. Kukho imfuno ekhulayo yeengcali kwintaka kunye nakwishishini lokhenketho lokuthatha inxaxheba kutyelelo lokuziqhelanisa olwenzeka ngaphambi komboniso. Abathathi-nxaxheba bakhenketho lwe-African Birding Expo bahlala bevela kumazwe ahlukeneyo kubandakanya iPanama, iTaiwan, iAustralia, iUSA, iUK, iRwanda, iKenya neTanzania. Abathengisi babandakanya iinkampani zokhenketho, iihotele, iindawo zokulala, iikampu, izikhokelo, abathengisi beencwadi, ubugcisa, iivenkile zokutyela kunye nabaqulunqi.
Umboniso weeNtaka zaseAfrika ucwangciselwe ukwakha uphawu lwendawo olomeleleyo, nolwazekayo olutsala iindwendwe zasekhaya nezamazwe aphesheya kwaye luxhase ulondolozo kunye nokukhula kokubukela kweentaka eUganda. Olu shicilelo luza kutsala amakhulu ababukeli beentaka, ababhali bezohambo, abasebenza kubakhenkethi, abanini beendawo zokulala, kunye nabanye abadlali kwicandelo lezokhenketho kwihlabathi liphela egxile e-Afrika njengendawo ephambili yokubukela iintaka. Imisebenzi yomboniso iza kubandakanya ukhenketho lwangaphambi nangemva kohambo lwentaka, imiboniso, iiforum zeshishini, iiklinikhi zentaka, ukuhamba ngeentaka, iiklinikhi zokufota, uqeqesho oluphambili lweentaka, kunye nokwaziswa kwephephancwadi lentaka, ukubiza ezinye.